Gerard Pique oo diyaar u ah in uu ka fariisto ciyaaraha qaranka - BBC News Somali
Gerard Pique oo diyaar u ah in uu ka fariisto ciyaaraha qaranka
Image caption Gerard Pique ayaa horay u shaaciyay in uu ciyaaraha caalamiga ah ka fadhiisan doono Koobka Adduunka ka dib, balse hadda ayuu sheegay in uu soo hormarin doono haddii dhibaato loo arko.
Ciyaaryahanka difaaca uga dheela Barcelona, Gerard Pique ayaa sheegay in uu ka fariisan doono ciyaaraha caalamiga ah ka hor Koobka Adduunka, waase haddii dhib loo arko taageerada uu u muujiyay aftida Catalonia.
Barcelona ayaa 3-0 kaga badisay kooxda Las Palmas Axaddii, iyadoo garoonku uu maran yahay oo taageerayaal aysan joogin, ka dib markii ay magaalada ka dhaceen daganaansho la'aan.
Ciyaartoygan 30 jirka ahna wuxuu sheegay in ay ahayd ciyaartii ugu adkayd ee soo marta.
"Waxay ila tahay waan sii wadi karaa" ayuu yiri Pique.
"Laakiin haddii guddigu ay xaqiiqdii u arkan in aan dhibaato ahay, tallaabo ayaan gadaal u qaadi xulka qarankana waan ka bixi inta ka horraysa 2018ka.
Booliska Spain oo dilay tuhunsanaha weerarkii Barcelona
"Waxaa jira dad badan oo Spain ku sugan oo ka soo horjeeda waxa dhacay maanta kuwaas oo rumaysan dimuqraadiyadda."
Gobolka Catalonia ee dalka Spain waxaa ku nool 7.5 milyan wuxuuna ku yaalla waqooyiga-bari ee dalka Spain, waxay leeyihiin luuqad iyo dhaqan u gaar ah, caasimaddooduna waa Barcelona.
Ismaamul heer sare ayay leeyihiin, laakiin dastuurka Spain uma aqoonsana dal madaxbannaan.
Ciyaartii Axaddii dhacday ka hor Pique ayaa Twitterka soo dhigay sawir muujinaya isaga oo aftidii u codaynaya.
Ciyaar yahankan horay ugu dheeli jiray Manchester United ayaa soo dhigay qoraal uu macnihiisu yahay "Waan codeeyay, Inaga oo wada jirnana waxaan nahay difaacayaasha dimuqraaddiyadda ee aan la joojin karin".